CNF, CDF-Mindat le CDF-Matupi Kahdohnak ah Kan Fa Nau Le Minung Pa 8 Bak An Nunnak A Liam Than>>>>> – Onlinenungak
CNF, CDF-Mindat le CDF-Matupi Kahdohnak ah Kan Fa Nau Le Minung Pa 8 Bak An Nunnak A Liam Than>>>>>
July 23-25 Kahdohnak ah CNF, CDF-Mindat le CDF-Matupi in Minung 8 Nunnak Liam
uly 23-25 ah Mindat peng chung le Matupi-Mindat karlak ahacangmi CNF le CDF i bawm in SAC ralhrang he kahdohnak ah CNF le CDF lei in minung 8 an nunnakaliam, tiah Mindat mipi uknak lei bu nih thawngthanhnak ah an langhter.
July 23 ah Mindat peng Yanpan khuate pawng ah CDF-Mindat le SAC ralhrang karlak kahdohnakachuak i SAC ralhrang lei in minung2an thi i ralhrang tampi hliamhma an pu hna.
SAC ralhrang pawl hnu lei ah an zaam i July 24 ah CDF-Mindat nih Shwe Twin Too khuate tiang an dawi hna.
Asinain, SAC ralhrang thazaang chapmi pawl le CDF-Mindat cu Shwe Twin Too ah an i tong i kahdohnakachuak tthan.
Shwe Twin Too kahdohnak ah SAC ralhrang leiathimi le hliamapumi an tam bang in CDF-Mindat lei in minung4an nunnakaliam ve.
A nunnakaliammi hna cu:
1) Salai Thang Ki Hung
2) Salai Thang Teik Mang
3) Salai Ha Om
4) Salai Bawi Mang Naing an si.
Cun, July 24 ah Matupi lei inarak ttummi SAC ralhrang pawl cu Sih-wanu timi khuate pawng ah CNF, CDF-Mindat le CDF-Matupi he an i kap hna.
Sih-wanu khuate pawng kahdohnak ah CDF-Matupi in minung pakhatanunnakaliam i, CNF lei in minung3an nunnakaliam, tiah Mindat mipi uknak lei bu nih nihin (July 30) ah thawngpang an chuah.
CNF in minung3an nunnakaliam timi kong ah CNF lei nih fehternakaum rih lo.
CNF in Runno Phun Thang Hnin cu July 24 kaddohnak ahanunnakaliam, tiah CNF nih ngaihchiatnak ca an chuahmiaum.
Asinain,adang CNF ralkap pahnih thih le thih lo kong ah CNF nih official in an chuahmiaum lo bang in The Chin Journal zong nih kan fehter kho lo.
တိုက်နယ် (၁) ဘက်​ခြမ်းမှာ​ေတာ့ ဇူလိုင် ၂၃ ရက် မှာ စကစတပ်တွေ ရမ်ပန်းရွာအထိတက်လာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တပ်စွဲကြပါတယ်။
အဲဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှ CDF-Mindat တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ စကစတပ်က ၂ ဦးကျဆုံး အများအပြားဒဏ်ရာရပြီး ညနေပိုင်းမှာလည်း တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တနေ့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက် ကျတော့ စကစတွေနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ CDF-Mindat က နောက်ကနေလိုက်ပြီး ရွှေတွင်းတူးရွာအထိ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ စကစ စစ်ကူရောက်လာပြီး ဆုတ်သွားတဲ့တပ်ရင်းကို လာရောက်အင်အားဖြည့်ပြီး ပြန်တက်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆင်းလာတဲ့ CDF-Mindat နဲ့ စကစ တပ်တွေ ဒန့်ဒီးရွားနားမှာတွေ့ဆုံပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ စကစဘက်က ထိခိုက်မှုများခဲ့ပြီး CDF-Mindat က ရဲဘော် ၄ ဉီးကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဆလိုင်း ထန်းကီးဟုန်း (ကျည်ထိ)၊ ဆလိုင်းထန်းတိတ်မာန်၊ ဆလိုင်းဟာအွမ်၊ ဆလိုင်းဘွေမာန်နိုင်း တို့ဟာ လက်နက်ကြီးထိ ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အနောက်ဘက် မတူပီကနေဆင်းလာတဲ့ စကစတပ်ရင်းက ဇူလိုင် ၂၄ ရက် မှာတော့ ရှစ်ဝါနူးရွာမှာ CDF-Mindat, CNF, CDF-Matupi စုပေါင်းတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စကစဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူတွေရှိခဲ့ပြီး Matupi-CDF မှ ၁ ဦး၊ CNF မှ ၃ ဦး တိုက်ပွဲကျခဲ့ပါတယ်။